Breaking News: Hoggantootni RIB guyyaa har’aa MM Dr Abiyyii irratti mormii kaasan. – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsBreaking News: Hoggantootni RIB guyyaa har’aa MM Dr Abiyyii irratti mormii kaasan.
Breaking News: Hoggantootni RIB guyyaa har’aa MM Dr Abiyyii irratti mormii kaasan.
Hoggantootni RIB guyyaa har’aa MM Dr Abiyyii irratti mormii kaasan.
MM Dr Abiyyiin guyyaa har’aa jeneraalota olaanoo 24 waliin marii gaggeesse irratti mormiin isa mudachuu dhagahame.
Akka hirmaattotni marichaa tokko jedhanitti marii har’a Dr Abiyyiin waame irratti dhalattooti Tigiraayii fi Oromoo kan tahan tokkollee akka hin argamne himaniiru.
Matii kanatti ajajoota Izii bahaa, lixaa, Kibbaa fi kaabaa dabalatee kanneen Dr Abiyyiif amanamoo tahan qofaan kan argaman tahus akka marii isaattinTigiraayii fi Oromiyaa keessatti waan tahaa jiruuf tarkaanfii barbaachisu akka fudhatamu addatti immoo dhalattoota Tigiraay RIB keessa jiran hunda irratti horfoffiin akka taasisamu bifa addaan yoo kan deeman tahe tarkaanfiin akka irratti fudhatamuu fi kanneen aangoo irra jiran aangoo irraa akka kaafaman jechuun akkasumas naannoo tigiraay keessatti mormiin akka TPLF irratti dhalatuuf kanneen hojjetaniif durgoon guddaa kennuun akka hojjechiisuu dandahan dubbachuu isaanii barame.
Qondaaltotni waraanaa kunis ajaja Dr Abiyyiin dabarse kana irratti akka mormanii fi addatti ajajootni jaha kun tahuun qabu bifa biraan itti deemamuu qaba jechuun ifatti mormaniiru.
Oromiyaa keessattis bifuma amma jiruun ummata WBO sooru jedhamanii shakkaman irratti ukkaamsaan hidhaanii fi bakka namni hin arginetti yoo tahe immoo akka ajjeesaman dabballoonni ABO jechuun afaan guutee dubbachuu isaa qondaalli olaanaa tokko naaf himeera.
Caamsaa 23 2020
Guyyaa har’aa Warranni RIB magaalaa Amboorraa huccuu sivilii uffachuun 3f hedduun bahaa jiru. Militariin hedduus fi federaal polisis akkasuma bahaa jiru. Keeasattu warri siviiliin bahan kun ummaatallee osoo hin salfanne guyyaa huccuu ofii/seeraa dhiiste siivilii fakkaattee meeshaa hidhannoo guutuun fe’amanii deeemaa jiru. WBO giddu galeessaa of eggannoo cimsaa
Gullisoo jalaatii kan argamtu #calliyaa_eekkaatii waarrana goollesssituu EPP amma sa’a 12:30pm kanaati #WBOn marsaa jalqabaa daaraa bottoroo godhee marsaa 2ffaa boodaan ishee dhufaa jirtumoo qophii addaan eggachaa jiraa milkiin galii WBO Koo yaa gooftaa dhiiraa
Oromiyaan ni billiisoomti
Gabronfataan nii kuftii !!!
EPP Magaalaa finfinnee addatti bulchiinsa mataa ishee qabaattee amaaraan akka bultu Kolonel #Abiiyyii fi #Taakkalaa_uumaa dubbii xumuranii jiru!
Maalif akka uummata oromootti iyyaa turre hubadhaa! Kufaattii oromoo oolchuuf oromoon hundi tokkummaan ka’uun dirqama!
Muftiin Olaanaan Dhimmoota Islaamaa Haaji Umar Idriis guyyaa har’aa ayyaana Iidaa sababfachuun haasawa godhan keessatti “የክልል 14 መስተዳድር” jechuun Finfinnee yaaman. – https://t.co/BpX0E2ZNA9 pic.twitter.com/XMsKJUHdsb
— Kichuu (@kichuu24) May 23, 2020
EPP madda galii Kan ta’u jimaa ykn caatii guban! Caatii balleesina jechuun yeroo darbe magaalaa adaamaatti guban! Amma immoo #Wallootti guban!
Akkas ture dubbiin Gaaddisaa fi Gamtaa jedhamusun!
Dhugaa yoo wlti-himne, Gaaddisa kan diige PP dha, Gamtaa kan hambise PBOdha. Gamtaa irratti walfalmiin ture, akkamiin akka naannoolee filannoo gidduu isaanitti qooddatanirratti ture. PBO Godinoota 11 gaafate, “Shawa bahaa dabalatee ,baha, kibba bahaa fi kibba Oromiyaa, Kaabaa irra immoo Wallo- Kamisee naaf dhiisaa !” yaada jedhu jalqabarratti dhiheeffate. Godinaalee hirmaachuun ABO fi KFO ni didame. Oromoo godinaan qoodun dogoggora seenaa ta’a jedhamee, falmame. Dhumarratti KFOn shallaga ittiin paartileen sadeen itti kaadhimmamaa dorgommiif dhiheeffatan irratti yaada ‘dhibbeentaan qooddachuu!” jedhu dhiheesse. “40% ABOf, 35% KFOf fi 25% PBOf” yaada jedhutu dhiyaate. Yaadni kun ABOdhan yemmuu fudhatamu, PBOdhaan ni morme. Jawaar “waan gaariitu isiniif kenname, dhaabni keessanis haaradha, fudhadhaa!” jedheeti, PBO gorse. Tarii kanumaaf mormiin itti ka’aa jira fakkaata, Arsii ta’ee KFO galuun isaatis waan biraati! PBOn yaada kana kufaa godheeti garagalcha kanaa dhiheeffate, Kanaaf Gamtaan osoo hinhundeeffamin hafe!
Akkaasi dubbichi! Dhugaan ilmoo waaqaati!
Walga’ii har’a iizzii hunda irraa walitti qabee Ashaagireen mariisise irratti mormii guddaan isa mudatus,
– Lixa Oromiyaa, Lixa Shaggariifi Kibba Oromiyaa
– Tigiraay irratti murtiin gurguddaan akka darbe oduun gola isaaniitii baate ni himti.
#Lammaan nu waliin jira
#Lammaan qabsoo Ormoo hin ganne…
Ilmaan Oromoo Lola Halagaan Karoorse Keessatti Qodaa Fudhatanii Dhumuun Fafa!